War-saxaafadeed Ay Si Wada Jir Ah U Soo Wada Saareen Labada Xisbi Ee UCID Iyo KULMIYE | Somaliland.Org
October 5, 2005	Hargaysa(Jam)- Guddoomiyayaasha labada Xisbi – KULMIYE iyo UCID ee Mucaaradka Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Mudane Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay Xukuumadda iyo Xisbiga UDUB in ay si aan sharciga waafaqsanay u gacan maroojiyeen codbixintii Doorashada golaha Wakiilada Somaliland ee goobo ka mida degmooyinka.
War saxaafadeed cabahso ah oo shalay ay wada jir u soo saareen labada Guddoomiye, Axmed Siilaanyo iyo Fasal Cali Waraabe waxa ay ku sheegeen in maalintii ay socotay codbixinta doorashadu ee 29 September, xukuumaddu si ay khalkhal uu galiso kalsoonida doorashada ay faragelin ku samaysay goobo badan oo codbixntu ka socotay iyo waliba muraaqibiin xisbiyada mucaaridka ah uga wakiil ahaa goobaha codbixinta, oo qaarkood laga saaray goobihii codbixinta ee ay ka hawlgalayeen.
Labada hoggaamiye Xisbi ee Mucaaridka ah eedaymaha ay u jeediyeen Xisbiga UDUB iyo Xukuumadda waxay marag muujin u soo qaateen nuqul ka mida waraaqaha codbixinta ee asliga ah oo ku qornaa sanduuq yaalay Civil Center-ka ee Hargaysa warqadaas oo loogu codeeyay musharax ka tirsan xisbiga KULMIYE oo la yidhaahdo Cabdicasiis Maxamed Samaale, ka dibna la sheegay in warqadaas suuqa laga helay iyada oo ay sitaan caruur yaryari.
Mudane Axmed Siilaanyo iyo Fasal Cali Wargaliyeen gudida doorashooyinka Qaranka, Gudida Xeerbeegtida Doorasha, Goobjoogayasha Caalamiga iyo Deeq bixiyayaasha in labada xisbi – KULMIYE iyo UCID in aanay ogalaan doonin sanaduuqda doorashada ee aan loo maamulin si sharciga waafaqsan.
Labada Guddoomiye Xisbi war-saxaafadeedka ay soo saareen oo faahfaahsan waxay ku sheegeen sidan.
“Labada xisbi Qaran UCID iyo KULMIYE waxay ku habmalyaynayaan shacbiga Somaliland sdia nabadgalyada ah ee ay uga qeyb qaateen doorashadii baarlamaanka, iyo hawl wadaeenada Komishanka Qaranka gaar ahaan dhallinyarada Jaamacadda iyo Booliska iyo ciidamada dhammaantoodba.
In kasta oo uu shacbigu si nabadgelyo ah u coddeeyay waxa muuqata in xisbiga UDUB iyo xukuumadda si aan sharciga waafaqsanayn u gacan maroojiyeen cod bixintii degmooyinka goobo ka mida ah.
Waxa muuqata in muraaqibiintii xisbiyada mucaaridka qaar ka mida ay xukuumaddu ka soo saartay goobihii ay ku qornaayeen, qaar ka midana meel cidla ah lagu dajiyay (degmada Saylac afar muraaqib oo UCID ah iyo degmada Lughaya oo laba muraaqib oo UCID ahi ay Maqnaayeen).
Waxaa kale oo jira goobo muraaqibiintii mucaaridka xoog lagaga saaray goobta codaynta isda Agabar, Jifada iyo Kalabaydh B, waxa kale oo aanu ka cabanaynaa in UDUB goobo badan u hayso faro galin si ay khalkhal u geliso doorashada, waxaana ka mid ah goobahaas Civil Centre-ka Hargeysa ee sanduuqa 283 oo warqado laga saaray ay leeyihiin xisbiyada mucaaradka ahi, gaar ahaan xisbiga KULMIYE oo cadaynteedii ay tahay warqadan hoos ku qoran oo aanu suuqa ka soo helnay saaka saacadu markay ahayd 9 : 30 AM.
Warqadaas oo serial Numberkeedu yahay 0134234, looguna codeeyay musharaxa 34 Cabdicasiis Maxamed Samaale.
Waxa intaas dheer in xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE la xidhxdhay xubno guddiga fullinta oo doorashda ka shaqaynayay, iyadoo sabab lagu xidhayna ilaa hadda aanay Boolisku naga qancin, waxa aanu u aragnaa Dawladii oo awoodeeda ku isticmaalaysa Xisbiyada mucaaridka ah.
Sidaasi darted labada xisbi Qaran waxay u sheegayaan guddida doorashada Qaranka, guddida xeer beegtida, goob joogayaasha caalamiga ah iyo deeq bixiyayaasha in aanay ogolaan doonin sanaaduuqda aan loo maamulin si sharciga waafaqsan. Waxa kale oo aanu guddiga doorashada ka rabnaa in ay arrimahan jawaab naga siiyaan.”
Tirinta Codadka Doorashada ee Hargeysa oo Hakad galay
Hargeysa(Jam) Tirinta codadkii Doorashada ee Hargeysa iyo Degaanada hoos yimaadda ayaa shalay Hakad ku yimid, kadib markii xisbiga UDUB uu dalbadey in Dib loo wada tiriyo dhammaan codadka sanaadiiqda ee Goobaha cod-bixinta ee guud ahaan Caasimaadda Hargeysa.